चुनावी सरकारको मतदाता लोभ्याउने बजेट, यस्ता छन् बजेटका विशेषता
जेठ १६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारले गणतन्त्र दिवशको दिन (जेठ १५ गते) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ एकसाथ जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
के छन् बजेटका विशेषता ?
१. सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट वितरण गरिने सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । योसँगै अब वृद्धवृद्धाहरुले मासिक ४ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सरकारले १ खर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
२. निःशुल्क कोरोना खोप
सरकारले सबै नेपालीलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड –१९ विरुद्वको खोप (कोरोना खोप) लगाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा कोरोना खोप खरिदका लागि सरकारले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विभिन्न अस्पतालहरुको पुर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८ र ७९ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
३.सशर्त अनुदानमा बृद्धि
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेगरि १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान तर्फ ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरुलाई सशर्त अनुदानतर्फ ३५ अर्ब ८७ करोड र समानिकरण अनुदान तर्फ ५७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकम प्राथमिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको सुत्रका आधारमा निर्धारण गरिएको सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सशर्त अनुदानमा बृद्धि गरिएको बताए ।
४. कृषि क्षेत्रको बजेटमा बृद्धि
सरकारले आगामी वर्षमा सञ्चालन हुने कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमको लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरेको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चार अर्ब बढि हो । गत वर्ष उक्त क्षेत्रको लागि ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषि क्षेत्रअन्र्तगत १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रासायनिक मल खरिद अनुदानको लागि व्यवस्था गरिएको छ । आधिकारीक बिक्रेताबाट बिउबिजन खरिद गरि उत्पादनमा सहभागी हुने किसानहरुलाई खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
सरकारले देशभरी बाँझो रहेका जमिनलाई कृषि प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । बाँझो जमिनलाई व्यवसायिक कृषि गर्ने उदेश्यले व्यवसायिक तथा निजि क्षेत्रलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रयोग गर्न दिईने बजेट मन्तव्यको क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने वास्तविक किसानहरुले अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको थप विकास गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७१ वटा थप जोन सञ्चालन गर्नेछ । रासायनिक मल कारखाना निर्माणको गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने र दुध पाउडर निर्माण गर्नेसम्बन्धी कारखाना खोल्न चाहनेलाई ८० प्रतिशत सम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम भने कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई १ अर्ब २७ करोड खर्च गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने जम्मा ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
५. शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बृद्धि
शैक्षिक क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरि सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यो शीर्षकमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा आधारित शैक्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम बृद्धि गरि १० अर्ब रकम पु¥याएको छ ।
विभिन्न शैक्षिक विज्ञहरुले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई संघीयता विरोधी र निर्वाचनमुखी हुँदै आएको आरोप लगाएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म पढ्ने बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने सरकारले घोषणा गर्ने जनाएको छ । त्यसको लागि सरकारले ८ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
६.सांसद विकास र गरिबी निवारण कोष खारेज
सरकारले अहिले सांसदहरुले सञ्चालन गर्दै आएको सांसद विकास कोषको नाममा परिचित स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुने भन्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट मन्तव्यको क्रममा बताएका छन् । स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत प्रत्यक्ष निर्वाचित तर्फका सांसदहरुलाई सरकारले ६ करोड प्रदान गर्दै आएको थियो । त्यस्तै सरकारले लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको गरिबी निवारण कोषको खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको सो कार्यक्रम सरकारले बजेट भाषणमार्फत खारेज गरेको हो ।
७. कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा बृद्धि
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २ हजारले बृद्धि गरेको छ । सबै तहका कर्मचारीको समान आधारमा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बजेट मन्तव्यमार्फत मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै सरकारले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको महंंगी भत्तालाई निरन्तरन्ता दिने र कर्मचारीलाई लक्षित गरेर सहुलियत आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले वार्षिक १० दिन पर्यटन विदा दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । त्यसरी दिइने बिदा तलबसहितको हुने बजेट मन्तव्यमार्फत जनाइएको छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागु हुने गरी प्रहरीको रासन भत्तामा बृद्धि गरेको छ । नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरीले अहिलेदेखि पाउँदै आएको रासनभत्तामा १५ प्रतिशत बढि प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले प्रहरीको रासनभत्ता ६ वर्षमा पहिलो पटक बृद्धि गरेको हो ।
८. रेलमार्ग र सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता
सरकारले भौतिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पुर्वाधारको क्षेत्रमा विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास तर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका ठुला आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षमा थप काम हुने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा १ सय वटा विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । रक्सौल काठमाडौं र काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग सञ्चालनको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले रेल यातायातको लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरि सरकारले चार अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
९. आयकर र भञ्सारतर्फ आकर्षक छुट
सरकारले साउनदेखि लागु हुने गरि २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ । कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, चलचित्र उद्योग, सञ्चार, हवाई कम्पनीको कर योग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आय कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती उद्योगले अब १० वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले बिजुली कारमा लगाएको अन्तःशुल्क कर पनि खारेज गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बिजुली कारमा अन्तःशुल्कसँगै भन्सार शुल्कमा निकै अस्वभाविक बढोत्तरी गराएका थिए । उनले ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क बढाएका थिए । जसलाई अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख्य रुपमा घटाएका छन् ।
होसियार ! यी कम्पनीका लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्
१ असार, काठमाडौं । सेयर बजारको पछिल्लो उछाललाई हेर्दा बिभिन्न…
१ असार, काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर कारोबार…
नेप्सेमा सिटिजन्स बैंकको शेयर सूचिकृत
दुई इन्स्योरेन्स कम्पनी आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै पुगे धितोपत्र बोर्ड
जीवन विकास लघुवित्तले पायो आईपीओ जारी गर्न बोर्डबाट अनुमति